ယောက်ျားနို့တွေ ဘယ်လို အပျောက်ဖျောက်မလဲ – Gentleman Magazine
ယောက်ျားနို့တွေ ဘယ်လို အပျောက်ဖျောက်မလဲ
ယောက်ျားတိုင်း နို့ထွက်လာမှာကို ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ နို့တွေ ရှိတာဟာ ယောက်ျားတွေကို ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှု လျော့နည်းစေပါတယ်။ အဲဒါတွေ ထွက်မလာအောင်ဆိုရင် အစားအသောက်ပုံစံကို ပြောင်းလဲပြီး သင့်တော်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ရပါမယ်။
ဘာကြောင့် ယောက်ျားနို့တွေ ထွက်တာလဲ
ယောက်ျားနို့တွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အချက် ၂ ချက် ရှိပါတယ်။ ပထမအချက်က သင် အဝလွန်နေရင်ပါ။ ယောက်ျားနို့ဆိုတာ ရင်အုပ်ကြွက်သားပေါ် အဆီတွေ စုနေတာပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က တစ်နေရာထဲကွက်ပြီး အဆီမချနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံး အဆီချရပါမယ်။ အဆီချဖို့ဆိုရင် အပျော့စား နှလုံးလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းအချို့လုပ်ရမဲ့အပြင် အစားအသောက်လဲပုံစံပြောင်းရပါမယ်။
တချို့တွေကျတော့ Gynecomastia လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အခြေအနေကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ အဲဒိအခြေအနေမှာ ခန္ဓာကိုယ်က အီစထရိုဂျင် မိန်းမဟော်မုန်းကို ပိုထုတ်ပေးပြီး တက်စတိုစတီရုန်း ကျားဟော်မုန်း လျော့ထုတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဟော်မုန်းအခြေအနေ ပြောင်းလဲစေတဲ့ ဆေးတွေစားထားရင် အဲဒါ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဝှေးစေ့ကျူမာ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေမှာလဲ ဒီအခြေအနေကို တွေ့ရပါတယ်။ ကုသဖို့ကတော့ အီစထရိုဂျင် လျော့ကျစေမယ့် ဆေးတွေ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သုံးစွဲရပါမယ်။ မပျောက်ရင် ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရပါမယ်။
နှလုံးလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ အချိန်ပေးလုပ်နိုင်ရင် အဆီတော်တော်များများ လျော့ကျစေပါတယ်။
၁. အချိန်ပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းများ
အချိန်ပိုင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်တာက သင့်ရဲ့ အဆီပိုတွေကို အများဆုံး လောင်ကျွမ်းစေမှာပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့ကို မိနစ် ၂၀၊ ၂၅ မိနစ်လောက် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တာ စက္ကန့်သုံးဆယ်လောက် လုပ်ပြီးရင် လွယ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း တစ်မိနစ်ခွဲ လောက် လုပ်ပေးပါ။ အဲဒိနှစ်ခုပေါင်း အခေါက်ရေ ၈ ခေါက်ကနေ ၁၅ ခေါက် အတွင်း လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးပါ။.
အကောင်းဆုံး နှလုံးလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ အပြေးပါ။ ဒါပေမယ့် သင်က ပြေးရမှာမကြိုက်ဖူး ဆိုရင် တခြား ရွေးစရာတွေ ရှိပါတယ်။
Gym မှာ လှေလှော်စက်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ အပြင်မှာ တကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် လှေလှော်တာဟာ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းကို ကျင့်ပေးတဲ့အတွက် ယောက်ျားနို့တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။ ရင်အုပ်ကြွက်သားကို ကျင့်ပေးရာလဲ ရောက်ပါတယ်။
၄. Elliptical Machine
စက်ဘီးစီးတာက နှလုံးလေ့ကျင့်ခန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို အထူးပြုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူတော်တော်များများက ခြေရောလက်ရော သုံးရတဲ့ ဒိစက်ကို ပြောင်းသုံးကြတာပါ။ Gym တွေမှာ ရှိပါတယ်။
တင်းနစ်၊ ဘော်လီဘော၊ ဘောလုံး၊ ခြင်းလုံး အားကစားစုံဟာ နှလုံးကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်းကောင်းတွေပါ။ အားကစားတစ်ခုခုကို ရေရှည်ကစားပေးတာဟာ အဆီပိုတွေ လောင်ကျွမ်းစေပြီး ယောက်ျားနို့တွေ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ လုပ်နေစဉ်မှာ အဆီတွေ အရမ်းမလောင်ကျွမ်းစေပေမယ့် ကြွက်သားထုထည်တိုးလာတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု ပိုများလာစေပါတယ်။ အဲဒိလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ ကိုယ်ကာယလဲ တောင့်တင်းလှပစေပါတယ်။
၁. Seated chest press
၂. Cable Crossovers
၃. Incline Flyes
၄. Bench Press
အဲဒိလေ့ကျင့်ခန်းတွေက Gym မှာ လုပ်ရမှာပါ။ သင့်ရဲ့ Gym နည်းပြဆရာနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး လုပ်ကြည့်ပါ။
ယောက်ျားနို့တွေ ထွက်လာရင် မကြောက်ပါနဲ့။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်စားပြီး နှလုံးလေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပုံမှန်လုပ်ရင် ထွက်လာစရာ အကြောင်းကို မရှိပါဘူး။ဒါပေမယ့် တကယ်လို့ ဆေးကုရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်တော့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရုံနဲ့ မရတော့ပါဘူး။ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူသင့်ရင် ခံယူရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ယောက်ျားနို့တွေ ထွက်စပြုလာပြီဆိုတာနဲ့ တန်းလှုပ်ရှားလိုက်ပါတော့။
ယောကျြားနို့တှေ ဘယျလို အပြောကျဖြောကျမလဲ
ယောကျြားတိုငျး နို့ထှကျလာမှာကို ကွောကျတတျကွပါတယျ။ နို့တှေ ရှိတာဟာ ယောကျြားတှကေို ဆှဲဆောငျမှုနဲ့ ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျမှု လြော့နညျးစပေါတယျ။ အဲဒါတှေ ထှကျမလာအောငျဆိုရငျ အစားအသောကျပုံစံကို ပွောငျးလဲပွီး သငျ့တျောတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျရပါမယျ။
ဘာကွောငျ့ ယောကျြားနို့တှေ ထှကျတာလဲ
ယောကျြားနို့တှေ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ အခကျြ ၂ ခကျြ ရှိပါတယျ။ ပထမအခကျြက သငျ အဝလှနျနရေငျပါ။ ယောကျြားနို့ဆိုတာ ရငျအုပျကွှကျသားပျေါ အဆီတှေ စုနတောပါ။ သငျ့ခန်ဓာကိုယျက တဈနရောထဲကှကျပွီး အဆီမခနြိုငျပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ တဈကိုယျလုံး အဆီခရြပါမယျ။ အဆီခဖြို့ဆိုရငျ အပြော့စား နှလုံးလကေ့ငျြ့ခနျးနဲ့ ကိုယျကာယ လကေ့ငျြ့ခနျးအခြို့လုပျရမဲ့အပွငျ အစားအသောကျလဲပုံစံပွောငျးရပါမယျ။
တခြို့တှကေတြော့ Gynecomastia လို့ချေါတဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အခွအေနကွေောငျ့ ဖွဈတာပါ။ အဲဒိအခွအေနမှော ခန်ဓာကိုယျက အီစထရိုဂငျြ မိနျးမဟျောမုနျးကို ပိုထုတျပေးပွီး တကျစတိုစတီရုနျး ကြားဟျောမုနျး လြော့ထုတျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ဟျောမုနျးအခွအေနေ ပွောငျးလဲစတေဲ့ ဆေးတှစေားထားရငျ အဲဒါ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဝှေးစကြေူ့မာ ဖွဈနတေဲ့သူတှမှောလဲ ဒီအခွအေနကေို တှရေ့ပါတယျ။ ကုသဖို့ကတော့ အီစထရိုဂငျြ လြော့ကစြမေယျ့ ဆေးတှေ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွီး သုံးစှဲရပါမယျ။ မပြောကျရငျ ခှဲစိတျကုသမှု ခံယူရပါမယျ။
နှလုံးလကေ့ငျြ့ခနျးတှဟော အခြိနျပေးလုပျနိုငျရငျ အဆီတျောတျောမြားမြား လြော့ကစြပေါတယျ။
၁. အခြိနျပိုငျး လကေ့ငျြ့ခနျးမြား
အခြိနျပိုငျးနဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျတာက သငျ့ရဲ့ အဆီပိုတှကေို အမြားဆုံး လောငျကြှမျးစမှောပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျးကို တဈနကေို့ မိနဈ ၂၀၊ ၂၅ မိနဈလောကျ လုပျပေးသငျ့ပါတယျ။ ပွငျးထနျတာ စက်ကနျ့သုံးဆယျလောကျ လုပျပွီးရငျ လှယျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျး တဈမိနဈခှဲ လောကျ လုပျပေးပါ။ အဲဒိနှဈခုပေါငျး အခေါကျရေ ၈ ခေါကျကနေ ၁၅ ခေါကျ အတှငျး လုပျနိုငျသလောကျ လုပျပေးပါ။.
အကောငျးဆုံး နှလုံးလကေ့ငျြ့ခနျးကတော့ အပွေးပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျက ပွေးရမှာမကွိုကျဖူး ဆိုရငျ တခွား ရှေးစရာတှေ ရှိပါတယျ။
Gym မှာ လှလှေျောစကျနဲ့ ဖွဈဖွဈ၊ အပွငျမှာ တကယျပဲဖွဈဖွဈ လှလှေျောတာဟာ သငျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အပျေါပိုငျးကို ကငျြ့ပေးတဲ့အတှကျ ယောကျြားနို့တှကေို ဖယျရှားဖို့ အကောငျးဆုံးပါ။ ရငျအုပျကွှကျသားကို ကငျြ့ပေးရာလဲ ရောကျပါတယျ။
စကျဘီးစီးတာက နှလုံးလကေ့ငျြ့ခနျးကောငျးတဈခုဖွဈပမေယျ့ ခန်ဓာကိုယျအောကျပိုငျးကို အထူးပွုပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ လူတျောတျောမြားမြားက ခွရေောလကျရော သုံးရတဲ့ ဒိစကျကို ပွောငျးသုံးကွတာပါ။ Gym တှမှော ရှိပါတယျ။
တငျးနဈ၊ ဘျောလီဘော၊ ဘောလုံး၊ ခွငျးလုံး အားကစားစုံဟာ နှလုံးကနျြးမာရေး လကေ့ငျြ့ခနျးကောငျးတှပေါ။ အားကစားတဈခုခုကို ရရှေညျကစားပေးတာဟာ အဆီပိုတှေ လောငျကြှမျးစပွေီး ယောကျြားနို့တှေ ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။
ကိုယျကာယ လကေ့ငျြ့ခနျးတှဟော လုပျနစေဉျမှာ အဆီတှေ အရမျးမလောငျကြှမျးစပေမေယျ့ ကွှကျသားထုထညျတိုးလာတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့စှမျးအငျ သုံးစှဲမှု ပိုမြားလာစပေါတယျ။ အဲဒိလကေ့ငျြ့ခနျးတှဟော ကိုယျကာယလဲ တောငျ့တငျးလှပစပေါတယျ။
အဲဒိလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေ Gym မှာ လုပျရမှာပါ။ သငျ့ရဲ့ Gym နညျးပွဆရာနဲ့ တိုငျပငျပွီး လုပျကွညျ့ပါ။
ယောကျြားနို့တှေ ထှကျလာရငျ မကွောကျပါနဲ့။ တကယျလို့ သငျဟာ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့အစားအသောကျစားပွီး နှလုံးလကေ့ငျြ့ခနျးတှေ ပုံမှနျလုပျရငျ ထှကျလာစရာ အကွောငျးကို မရှိပါဘူး။ဒါပမေယျ့ တကယျလို့ ဆေးကုရမယျ့ကိစ်စဆိုရငျတော့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျရုံနဲ့ မရတော့ပါဘူး။ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျပွီး ခှဲစိတျကုသမှု ခံယူသငျ့ရငျ ခံယူရမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ယောကျြားနို့တှေ ထှကျစပွုလာပွီဆိုတာနဲ့ တနျးလှုပျရှားလိုကျပါတော့။
Previous: ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းဖို့ အကောင်းဆုံး ရေအစားထိုး စားစရာ
Next: ယောက်ျားတွေ ဘာကြောင့် အသည်းကွဲကြာရှည်ကြတာလဲ??